५० वर्ष बितिसक्दा पनि किन आएन पुरुषका लागि गर्भनिरोधक चक्की ? – Nepal Japan
21 October, 2019 20:09 | जल/वातावरण/स्वास्थ्य | comments | 22800 Views
विश्व समाज अहिले लैंगिक समानतामा निकैअघि बढेको छ भनिन्छ तर अझ पनि गर्भ निरोधमा अत्यधिक जिम्मेवारी महिलाकै काँधमा थोपरिएको छ र गर्भनिरोध गर्न महिलाका लागि अनेक औषधिहरु तयार छनु तर पुरुषका लागि विगत ५० वर्षदेखि गर्भनिरोधक चक्की उत्पादनमा तल्लिन रहे पनि यो बजारमा उपलब्ध छैन । यसको एउटै कारण पुरुषको अनिच्छा हो ।
पुरुषका लागि ५० वर्षदेखि गर्भनिरोधक चक्की आविस्कारको सक्रियता देखिए पनि यो अहिलेसम्म किन बजारमा आएन ? यस विषयमा न्यूयोर्कस्थित अल्बनी मेडिकल कलेज एल्डन मार्च बायोइथिक्स इन्स्टिच्यूट एन्ड डीपार्टमेन्ट अफ अबस्टेट्रिक्स एन्ड गाइनेकोलोजीमा सह प्राध्यापक लिसा क्याम्पो एङ्गल्स्टाइनको बिबिसिमा प्रकाशित यो अनुसन्धानामत्क रिपोर्ट यहाँ साभार गरिएको छ-
वैज्ञानिकहरू पुरुषका लागि गर्भनिरोधक चक्की विकास गर्न आधा शताब्दीदेखि काम गरिरहेका छन् । उत्साहजनक समाचारहरू प्रकाशित भए पनि नजिकैका औषधि पसलमा त्यो उपलब्ध भइसकेको छैन ।
यद्यपि अनुसन्धानका अनुसार कैयौँ पुरुषहरू चक्की उपलब्ध भए प्रयोग गर्न तयार रहेको पाइएको छ । ब्रिटेनमा यौनमा सक्रिय पुरुषहरूमध्ये हरेक तेस्रो पुरुषले चक्की वा इमप्लान्ट जस्ता हर्मोन गर्भनिरोधकका रूपमा लिन आफूहरू सकारात्मक रहेको बताए । ठीक त्यति नै सङ्ख्यामा अर्थात् हरेक तेस्रो ब्रिटिश महिला अहिले यस्तो औषधि प्रयोग गर्ने गर्छन्।
सर्वेक्षणमा सहभागी १० मध्ये ८ जनाले गर्भनिरोधबारे महिला र पुरुषले समान जिम्मेदारी लिनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका थिए । यस्तै अमेरिकामा गरिएको सर्वेक्षणमा सहभागी १८-४४ वर्ष उमेरका यौनमा सक्रिय अमेरिकी पुरुषहरू मध्ये ७७ % ले कन्डोम या भ्यासेक्टोमी जस्ता गर्भनिरोधक बाहेक अरू खाले गर्भनिरोधक प्रयोग गर्नमा “धेरै वा केही” रुचि भएको बताएका थिए।
संसारभर प्रजनन गर्ने उमेर समूहका हरेक तेस्रो जोडीले कुनै पनि गर्भनिरोधक प्रयोग नगर्ने गरेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको एक अध्ययनले देखाएको छ । तर प्रयोग गर्नेहरूबीच महिला गर्भनिरोधक उपायहरू सबभन्दा धेरै लोकप्रिय छन् ।
प्रत्यक्ष पुरुष सहभागी हुने उपायहरू निकै कम प्रयोग हुने गरेका छन्; ८ % कन्डोममा भर पर्छन् र २ % ले भ्यासेक्टोमी गर्छन् । तर सँधै यस्तै थियो भन्ने होइन । चक्की बन्नु अघि पुरुषहरू गर्भनिरोधमा सहभागी बन्नै पर्ने अवस्था थियो उदाहरणका लागि कन्डोम प्रयोग गरेर ।
अहिले दश करोड महिलाहरू चक्कीको प्रयोग गरिरहेका छन् र यो युरोप अष्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्डमा सबभन्दा धेरै प्रयोग हुने गर्भनिरोधको उपाय बनेको छ । चक्की अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र उत्तर अमेरिकामा लोकप्रिय यस्ता गर्भनिरोधकमध्ये दोस्रो र एशियामा तेश्रोमा पर्छ ।
उदाहरणका लागि स्त्रीरोग विशेषज्ञ अर्थात् गाइनेकोलोजिष्टबारे धेरैलाई थाहा छ तर पुरुष प्रजनन विशेषज्ञ अर्थात् एन्ड्रोलोजिष्टबारे धेरै कमलाई मात्रै थाहा हुने गर्छ।
पुरुषका लागि गर्भनिरोधक चक्कीबारे अनुसन्धान महिलाका लागि चक्की भन्दा दशकौँ पछि सुरु भयो। त्यसमा पनि पैसाको अभावले त्यो रोकियो।
औषधी बनाउने कम्पनीहरू, नियामकहरू र पुरुषहरू स्वय‌म्‌ले पनि सम्भावित ‘साइड इफेक्ट’हरूलाई कम स्वीकार गरेकाले पनि आंशिक रूपमा त्यसो भएको हो।
पुरुषका लागि बनाइएको “क्लीन शीट्स” नामक चक्कीबारे गरिएको अनुसन्धान अनुसार यसले वीर्य विनाको चरमोत्कर्ष गराउँछ।
त्यसैले पनि पुरुष चक्की प्रयोगमा आउन सकेन किनभने वीर्य निष्कासन गर्नुलाई पुरुष यौन क्रियाकलापको महत्त्वपूर्ण पाटोका रूपमा लिइन्छ।
केही पुरुष समूहरू खासगरी जो शिक्षित छन्, जो परम्परागत जेन्डर भूमिकालाई कम महत्त्व दिन्छन् ती पुरुष गर्भनिरोधक प्रयोग गर्न इच्छुक वा सहयोगी हुन सक्छन्।
गर्भनिरोधक चक्कीको स्वागत गरिए पनि र त्यो जताततै सजिलै पाइने अवस्था बने पनि त्यसले पुरुषका लागि चक्की व्यापक प्रयोगमा आउँछ भन्ने निश्चित गर्दैन।
बन्ध्याकरण अर्थात् भ्यासेक्टोमी करिब २०० वर्ष अघि आविष्कार गरिएपनि विश्वभर नै महिलाका लागि स्थायी बन्ध्याकरण १० गुणा बढी हुने गरेको छ।
जब कि महिलाका लागि बन्ध्याकरण तुलनात्मक रूपमा कम प्रभावकारी, महँगो र जटिल हुने गर्छ। पुरुषका लागि गर्भनिरोधक चक्की बनाउनु अघि तथा सामाजिक र आर्थिक अवरोधहरू हटाउनु अघि समाजमा जेन्डर समानता हुनु पहिलो आवश्यक चरण हो।
हामी ५० वर्षदेखि पुरुषका लागि गर्भ निरोधक चक्की पर्खिरहेका छौँ, अब ५० वर्ष नकुरौँ।